Finland: Dad Al-shabaab xiriir laleh ayaa wadankeena jooga | Somaliska
Hay'ada Amniga ee Finland (Supo) ayaa sheegtay in ay jiraan shaqsiyaad xiriir la leh Xarakada Al-shabaab oo wadanka Finland ku nool. Sida uu qoray wargeyska Turun Sanomat Hayada Amaanka ayaa isha ku haysa tobanaan qof oo xiriir la leh Al-shabaab. Madaxa Supo ayaa xaqiijiyay in ay jiraan dad ay isha ku hayaan oo xiriir la leh Al-shabaab ayagoo intaas ku daray in Geeska Africa uu noqday goob dadka meleeshiyonimo loogu tababaro. Balse marka la eego sharciga Finland sharci daro ma ahan in qof uu ka qeyb qaato tababaro nuucaas ah. Supo ayaa intaas ku dartay xaalada finland in ay degentahay oo aysan ka cabsi qabin weeraro, ayadoo uusan waligeed weerar ka dhicin Finland. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in aysan Supo ka war hayn dad Somali ah oo ka soo dagaalamay Soomaaliya ayagoo sheegay in Soomaalida ku nool Finland ay si dhaqsi ah u koreysa oo hada lagu qayaaso 14,000 balse la sheegay intooda badan in ay yihiin dad ujeedo nabadeed leh.
Finland: Dad Al-shabaab xiriir laleh ayaa wadankeena jooga
Hay’ada Amniga ee Finland (Supo) ayaa sheegtay in ay jiraan shaqsiyaad xiriir la leh Xarakada Al-shabaab oo wadanka Finland ku nool. Sida uu qoray wargeyska Turun Sanomat Hayada Amaanka ayaa isha ku haysa tobanaan qof oo xiriir la leh Al-shabaab.
Madaxa Supo ayaa xaqiijiyay in ay jiraan dad ay isha ku hayaan oo xiriir la leh Al-shabaab ayagoo intaas ku daray in Geeska Africa uu noqday goob dadka meleeshiyonimo loogu tababaro. Balse marka la eego sharciga Finland sharci daro ma ahan in qof uu ka qeyb qaato tababaro nuucaas ah.
Supo ayaa intaas ku dartay xaalada finland in ay degentahay oo aysan ka cabsi qabin weeraro, ayadoo uusan waligeed weerar ka dhicin Finland.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in aysan Supo ka war hayn dad Somali ah oo ka soo dagaalamay Soomaaliya ayagoo sheegay in Soomaalida ku nool Finland ay si dhaqsi ah u koreysa oo hada lagu qayaaso 14,000 balse la sheegay intooda badan in ay yihiin dad ujeedo nabadeed leh.